Fri, Jul 10, 2020 at 11:39am
काठमाडौं, १९ वैशाख । शुक्रबारदेखि रिलिज हुने मल्टिस्टारर चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ लाई मल्टिप्लेक्स सिनेमा हलले उच्च शो उपलब्ध गराएका छन् । रिलिजअघि ओभरसिज, डिजिटल राइट्स र ब्रान्डबाट चलचित्रले दुई करोड कमाइसकेको बताइन्छ । मह सञ्चारको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रलाई किरण केसीले बनाएका हुन् । उनकै छोरो सुदन केसी चलचित्रका निर्देशक हुन् । चलचित्रमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, निरुता सिंह, पुष्पल खड्का, आँचल शर्मा,..
सलमानले गरे अक्षयलाई फोन, बलिउडको दुई प्रतिक्षित चलचित्र एक साथ भिड्ने
काठमाडौँ बैशाख १८, । बलिउडको दुई बहु प्रतिक्षित चलचित्र ‘सुर्यवंशी’ र ‘इन्शाअल्ला’ एक साथ भिडने भएपछि सलमान खानले अक्षय कुमारलाई फोन गरेर एकैसाथ रिलिज हुन नदिने बताएका छन् । सन् २०२०मा सलमान खानले नयाँ चलचित्र घोषणा गर्न नभ्याउदै अक्षय कुमारले ‘सुर्यवंशी’को रिलिज मिति पक्का गरेपनि यस विषयमा कुराकानी गर्न फोन गरेका थिए । किनभने सलमानको लागी इदको समय आफ्नो नयाँ फिल्म..
बलिउडका चर्चित अभिनेता रणबीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्ट ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दै
काठमाडौँ, १७ वैशाख विवाहको कारण अहिले बलिउडका चर्चित अभिनेता रणबीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्ट निकै चर्चामा छन् । फिल्म ब्रम्हास्त्रको शुटिङको क्रममा नजिकिएका यी जोडीले गोप्य इनगेजमेन्ट गरेको खबर पनि बाहिर आएको थियो । त्यसका साथै रणबीरको बुबा ऋषि कपुरले पनि आफ्नो छोराको लागी आलिया राम्रो रहेको बताएका थिए । त्यस्तै उनले रणबीरको आमाले पनि आलियालाई मन पराएको बताए । पछिल्लो समय..
बलिउड अभिनेत्री सुष्मिता सेनले गरिन आफु भन्दा १६ वर्ष कान्छो प्रेमीसँग इन्गेजमेन्ट
काठमाडौँ, १६ वैशाख आफु भन्दा १६ वर्ष कान्छा रोहमन शलसँगको प्रेम सम्बन्धमा रहेकी बलिउड अभिनेत्री सुष्मिता सेनले हालै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रेमीसँगको एक तस्वीर पोष्ट गरेसँगै उनीहरुको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर निकै चर्चा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुको तस्वीरलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रतियोगिता विभिन्न टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् । तस्वीरमा सुष्मिताको हातमा औठी देखिएको छ । क्याप्शनमा उनले ‘म कुनै शर्त बिना..
महानायक अक्षय कुमार र अमिताभ बच्चन भूतको फिल्ममा ?
एजेन्सी, १५ वैशाख । भूतको कथामा आधारित तमिल फिल्म कंचनाको रिमेकमा बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन र नायक अक्षयकुमार सँगै देखिने खबर बाहिरिएको छ । कमेडी र हररको मिश्रण तमिल फिल्म मुनी–२ः कंचना यसअघि व्यापक चलेको थियो । सोही कथा वस्तुमा आधारित रहेर हिन्दी रिमेक बन्ने भएकोमा अक्षय कुमार र अमिताभ बच्चनलाई फिल्ममा लिइने बताइएको छ । उक्त फिल्मको मुख्य भुमिकामा अक्षय कुमार देखिने..
‘छक्का पञ्जा २’ को पुनः प्रदर्शन, ‘कालो वर्ष’ सँग सिंगल स्क्रिनमा भिडन्त
काठमाडौं, १३ वैशाख । ०७४ को दसैँमा प्रदर्शन भएको छक्का पन्जा–२ ले ब्लकबस्टर व्यापार गरेको थियो ।अहिले पुनः प्रदर्शन गरिएको हो । चलचित्रको निर्देशन दीपाश्री निरौलाले गरेकी हुन् । युट्युबमा सार्वजनिक नगरिएको छक्का पञ्जा–२ को पुनः प्रदर्शनबाट आर्जन हुने रकम समाजसेवामा लगाइने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । दर्शकको अत्यधिक मागका कारण छक्का पञ्जा–२ पुनः प्रदर्शन गरिएको निर्देशक निरौलाले बताइन् । चलचित्रमा दीपकराज..
बलिउड अभिनेता अर्जुन रामपालकी प्रेमीका गर्भवती भएको खुलासा
काठमाडौँ बैशाख १२ । बलिउड अभिनेता अर्जुन राममपालकी प्रेमिका गर्भवती भएकी छन् । २० वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई अन्त्य गरेका रामपालले आफ्नो प्रेमीका ग्याब्रिएला डेमेत्रियाड्स गर्भवती भएको कुरा इन्स्टाग्राम मार्फत जानकारी दिएका हुन् । उनले इन्स्टाग्राममा लेखेका छन्, ‘तिमीलाई आफ्नो जीवनमा पाउँदा र नयाँ सुरुवातको लागि धन्य छु । यो बेबीको लागि धन्यवाद बेबी ।’ अर्जुनले इन्स्टाग्राममा सेयर गरेको तस्वीरमा ग्याब्रिएला गर्भवती..
अभिनेत्री मलाइका र अर्जुन कपुरको बिहे अचानक रोकिएपछि..
एजेन्सी, १० बैशाख । १९ अप्रिलको साइत तय भइसकेको अभिनेत्री मलाइका अरोरा र अर्जुन कपुरको विवाह हुने खबरले बलिउड तातिएको थियो । उनीहरूका फ्यान शुभकामना दिन थालिसकेका थिए । तर अर्जुनका बाबु बोनी कपुर नमानेपछि निर्धारित समयमा विवाह हुन पाएन । मलाइकाको वैवाहिक जीवन विच्छेद भएको दुई वर्ष भयो । उनले आफूहरू लामो समयदेखि खुसी नभएको र त्यसको असर परिवारमा देखिएकाले सम्बन्ध विच्छेद भएको बताइन्..
‘भारत’को ट्रेलर दमदार, शाहरुखले भने ‘क्या बात’ [भिडियो]
नयाँ दिल्ली, ९ वैशाख । बलिउड सुपरस्टार सलमान खान अभिनित ‘भारत’को ट्रेलर सोमबार अपराह्न सार्वजनिक भएको छ । बलिउड कलाकारले सामाजिक सन्जालमा ट्रेलर सेयर गर्दै प्रशंसा र शुभकामना दिएका छन् । सलमान खानले ट्वीटरमा ट्रेलरको लिंक सेयर गर्दै लेखेका छन्- एउटा मान्छे र राष्ट्रको सँगसँगै यात्रा । युटुब च्यानल ‘टि सिरिज’मा ट्रेलर अपलोड गरिएको दुई घन्टामै १४ लाखभन्दा बढीपटक हेरिसकिएको छ । बलिउड कलाकारले..
हेर्नुहोस् भद्रगोलका जयन्तेको सुन्दर परिवार, सम्बन्ध जुराएको हो फेसबुकले (तस्वीर सहित)
काठमाडौँ, ८ वैशाख । नेपाली चर्चित हास्य टेलिश्रंखला ‘भद्रगोल’ का लोकप्रिय कलाकार गोविन्द कोइराला ‘जयन्ते’ भद्रगोलकै कारण चर्चामा रहेका छन् । उनले म्यूजिक भिडियो देखि लिएर फिल्महरुमा समेत अभिनय गरिसकेका छन् । भद्रगोलमा उनको हाँसो सहित लामो स्वरमा काका भन्ने थेगो प्राय धेरै दर्शकको मुखमा झुण्डिएको पाइन्छ । उनले भद्रगोलमा कृषि पत्रकारको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । तर अहिले भद्रगोका अर्का चर्चित..
विवाहको ५ वर्षपछि बुबा बने अभिनेता आर्यन सिग्देल
काठमाडौँ, ६ वैशाख अभिनेता आर्यन सिग्देल बुबा बनेका छन् । शुक्रबार उनकी श्रीमती सपना भण्डारीले छोरोलाई जन्म दिएकी हुन् । आमा र बच्चा दुबैको अवस्था अहिले राम्रो रहेको छ । विवाहको पाँच वर्षमा उनको घरमा सन्तान लाभ भएको हो । आर्यन र सपनाले प्रेम बिवाह गरेका थिए । सन्तान सहितको फोटो आर्यनले सामाजिक सञ्जालमा पनि शेयर गरेका छन् । ..
लोकप्रिय कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको आज ६९औं जन्मदिन
काठमाडौं, ६ वैशाख । लोकप्रिय कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको आज जन्मदिन । १९५० अप्रिल १९ का दिन उनको जन्म काठमाडौंमा भएको हो । यस आधारमा उनी आज आफ्नो ६९औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । एक वर्षअघि मात्र कलाकार श्रेष्ठले श्रीमती यशोदा श्रेष्ठ गुमाएका थिए । उनका यमन श्रेष्ठ र सराना श्रेष्ठ गरी दुई सन्तान छन् । नेपाली कलाकारितामा सर्वप्रिय व्यक्तित्वको छवि बनाएका श्रेष्ठ ‘मह’ जोडीको..
साम्राज्ञी उछिन्ने भ्रम : पूजा शर्माले २० लाख पारिश्रमिक लिएको डंका !
बुधबार, बैशाख ४, २०७६ साल
काठमाडौँ बैशाख ४ । हल्ला र भ्रमको खेती गर्ने हिरोइनमध्ये एक नम्बरमा पर्छिन्, पूजा शर्मा । औषत अभिनय गर्ने उनको पछिल्लो फिल्म ‘रामकहानी’ फ्लप भएको थियो । तर, लगत्तै उनले अभिनय गरेको फिल्ममा १५ लाख लिएको दाबी गरिन् । भर्खरै सुटिङ सकिएको ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ मा उनले त्यति बिघ्न रकम लिएको हल्ला चलाएकी थिइन् । जबकी त्यो पैसा उनी भन्दा कयौं गुणा..
सलमान खानको ‘बिइङ्ग ह्युमन’ कालोसूचीमा
सोमबार, बैशाख २, २०७६ साल
एजेन्सी, २ वैशाख सामाजिक सेवाका लागि बलिउड अभिनेता सलमान खानले सञ्चालन गरेको गैरसरकारी संस्था ‘बिइङ्ग ह्युमन’ कालोसूचीमा परेको छ । बिइङ्ग ह्युमनलाई मुम्बइ महानगरपालिकाले कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौता अनुसार महानगरले उपलब्ध गराएको ठाउँमा डाइलासिस केन्द्र स्थापना नगरेपछि उनको संस्थालाई मुम्बइ महानगरपालिकाले कालोसूचीमा राखेको हो । सन् २०१६मा मुम्बइ महानगरपालिका र ‘बिइङ्ग ह्युमन’बीच मुम्बइमा १२ वटा डाइलाइसीस केन्द्र स्थापना गर्ने परियोजनामा साझेदारीको..
बिना चन्दा नै नायिका श्वेता खड्काले माझी बस्तीमा बनाइन् ५३ घर, हस्तान्तरणको तयारी
आईतवार, चैत्र २४, २०७५ साल
काठमाडौं, २४ चैत । विभिन्न चर्चित नेपली चलचित्रकी नायिका श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ भीमटार माझी बस्तीमा नमुना बस्ती बनाएकी छन् । बस्तीमा ५३ वटा चिटिक्क परेका घर ठडिएका छन् । ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पीडितका लागि श्वेताले बस्ती बसाएकी हुन् । बस्तीको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नायिका श्वेताले बस्तीको दुई तीनवटा तस्बिर जुन ड्रोन क्यामेराले..
को हुन् ४५ वर्षीया मलाइकाको यस्तो फोटो खिच्ने ?
बिहिवार, चैत्र २१, २०७५ साल
काठमाडौँ, २१ चैत । मलाइका अरोडा गत हप्ता माल्दिभ्समा छुट्टी मनाउँदै थिइन्। माल्दिभ्सको समुन्द्र किनारमा छुट्टी मनाएका फोटा उनले समाजिक संजालमा शेयर गरेकी छन्। तिनै फोटोमध्ये एउटामा ४५ वर्षीया मलाइका बिकिनीमाथि बाथरोब लगाएकी थिइन्। उनले यसरी पोज दिएकी थिइन्, उनको बाथरोब हावामा उडिरहेको थियो। सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तासँगै फिल्म निर्देशक फराह खानले पनि यो फोटोको मजा लिएकी थिइन्। फराहले कमेन्टमा गालीको प्रयोग गर्दै..
बलिउड स्टार शाहरुख खानका छोरा आर्यनको बलिउड डेब्यु गर्दै
बुधबार, चैत्र २०, २०७५ साल
मुम्बई, २० चैत्र । पछिल्लो पटक जान्ह्वी कपुर र सारा अली खानको सुखद बलिउड डेब्युपछि अब बलिउडका किंग भनिने शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानले बलिउडमा डेब्युको तयारी गरेका छन् । तर आर्यनले अभिनयबाट बलिउड डेब्यु भने गर्न लागेका हैनन् । फिल्मफेयरका अनुसार आर्यनले चर्चित फिल्म निर्देशक करण जोहरको फिल्म तख्तका लागि सहायक निर्देशनबाट बलिवुडमा काम सुरु गर्न थालेका हुन् । करण जोहरले..
बजारमा आइपुग्यो नेपाली सर्ट मुभी पिज्जा [भिडियो सहित]
सोमबार, चैत्र १८, २०७५ साल
काठमाडौँ १८ चैत । झण्डै १३ मिनेटको चलचित्र पिज्जामा आकर्षक कथा रहेको नेपाली सर्ट मुभी पिज्जा बजारमा आएको छ । एलपी पाण्डेको कथावस्तु तथा निर्देशन रहेको सर्ट मुभी पिज्जा ग्रिनस्क्रिन युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजानिक गरिएको हो । प्रेममा धोका पाएर एक्सिडेन्टमा ज्यान गुमाएकी चलचित्रकी पात्र नेहा आफ्नो मृत्युपछि पनि माया खोज्दै आत्मा बनेर पार्कमा यसै चलचित्रका प्रमुख पात्रको रुपमा रहेका श्री सुमनलाई सुनाउँछिन्..
अक्षय कुमारको 'केसरी'ले कमायो ७ दिनमा १०० करोड
बिहिवार, चैत्र १४, २०७५ साल
एजेन्सी, १४ चैत अक्षय कुमार अभिनित चलचित्र केसरी यो वर्ष सबैभन्दा छिटो १०० करोडको व्यापार गर्ने चलचित्र बनेको छ । प्रदर्शनमा आएको सात दिनमै केसरीले १०० करोडको कारोबार गरेको छ । केसरीले रणवीर सिंह अभिनित जोया अख्तरको चलचित्र गलीब्वाईले ८ दिनमा १०० करोडको कारोबार गरेको थियो । केसरीले बुधबार सम्ममा १०० करोडको कारोबार गरेको हो । टोटल धमालले प्रदर्शनमा आएको नवौँ दिनमा..
फिल्म ‘केदारनाथ’का जोडी सुशान्त र साराबीच बोलचालै बन्द !
बुधबार, चैत्र १३, २०७५ साल
काठमाडौं, १३ चैत । सैफ अली खानको छोरी सारा अली खानले सुशान्त सिंह राजपुतको अपोजिट रोलमा फिल्म ‘केदारनाथ’बाट बलिउड डेब्यू गरेकी थिइन् । फिल्ममा यी दुईको केमेस्ट्री निकै रुचाइएको थियो । यहाँसम्म कि यी दुईको बीचमा अफेयर भएको समेत खबर बाहिरिएका थिए । तर, अहिले भने यी दुईबीच बोलचालै नभएको खबर बाहिरिएको छ । यी दुईबीच यति ठूलो झगडा पर्यो कि उनीहरुले..
दीपिका पादुकोणको एसिड शिकार अवतारकाे पहिलाे लुक्स्
सोमबार, चैत्र ११, २०७५ साल
एजेन्सी, ११ चैत । मेघना गुलजारको फिल्म छपाकमा दीपिकाको यो लुक्स निकै कारुणिक देखिएको छ । पहिलो पोष्टर रिलिज भएको हो । दीपिका पादुकोण छपाकमा एसिड आक्रमण बाट बच्न सफल एक महिला लक्ष्मी अग्रवालको भूमिकामा देखिने भएकी छिन् । जुन अवतारकाे उनकाे तस्बिर हालै सार्बजनिक भएको छ । तस्बिर हेर्दा लाग्छ दीपिकाले निकै चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाएकी छिन् । छपाकमा दीपिकाको क्यारेक्टरको नाम..
मेरी बास्सैबाट बाहिरिए 'राजु मास्टर' र 'बल्छी धुर्वे'
आईतवार, चैत्र १०, २०७५ साल
काठमाडौँ, १० चैत नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने चर्चित हास्य टेलिश्रङ्खला ‘मेरी बास्सै’ निर्देशन गर्दै आएका राजु मास्टर (राजु पौडेल) र बल्छी धुर्वे (मरिचमान श्रेष्ठ) उक्त श्रङ्खलाबाट अलग भएका छन् । निर्देशकद्वयले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टाटस लेख्दै आफूहरु टिमबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन् । ‘एउटा स्किृप्ट राइटर भनेको खुला आकाशमा उड्ने चराजस्तै हो, ऊ जुन दिशामा पनि आफ्नो पखेटा फैलाएर उड्न सक्छ..
अक्षय कुमार ९० करोड पारिश्रमिक लिँदै सिरिज वेबका लागि
काठमाडौं, १० चैत बलिउडका खेलाडी अक्षय कुमार छिट्टै अमेजन प्राइमको वेब सिरिज ‘द एंड’मा देखिने छन् । उनी यो स्टन्ड बेस्ड शो हो । केही दिन अगाडि शरीरमा आगो लगाएर अक्षयले यस शोको बारेमा जानकारी दिएका थिए । शोको प्रतिक्षा र चर्चा हुँदै गर्दा अक्षयले यस कामको लागि लिएको पारिश्रमिकको चर्चा सुरु भएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार ‘द एंड’को लागि अक्षयले..
आँफु भन्दा २७ वर्ष कान्छीसँग रोमान्स गर्दै सलमान खान
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५ साल
एजेन्सी, ७ चैत २० वर्षपछि सलमान खान र सञ्जयलीला भन्साली फेरि एकसाथ काम गर्ने भएका छन् । यसका साथै यस फिल्ममा सञ्जयलीला भन्सालीले सलमन खानकी हिरोइन पनि फाइनल गरिसकेका छन् । फिल्म ‘इन्शाल्लाह’मा आलिया भट्ट मुख्य अभिनेत्री हुने पक्का भएको छ । दर्शकले अब यस फिल्ममा ५३ वर्षीय सलमान खान र २६ वर्षीया अभिनेत्री आलिया भट्टबीचको रोमान्स हेर्न पाउनेछन् । उमेरमा सलमान..
२० वर्षपछि संजय लीला भंसालीसँग टिमअप गर्दै सलमान
मंगलवार, चैत्र ५, २०७५ साल
काठमाडौं, ५ चैत ‘हम दिल दे चुके सनम’ फिल्मको २० वर्षपछि संजय लीला भंसालीको साथमा अभिनेता सलमान खानले टिमअप गर्दैछन् । यो संजय लीला भंसालीको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । पछिल्लो समय यसै फिल्मको फिमेल लिड अभिनेत्री र टाइटललाई लिएर निकै चर्चामा आएको थियो । अब भने यो फिल्मको मुख्य अभिनेत्रीको रुपमा आलिया भट्ट फाइनल भएकी छन् । आधिकारिक रुपमै सलमान र संजय..
रेखा थापा बनिन् काठमाडौं सुपर च्याम्पियन्सको मालिक
सोमबार, चैत्र ४, २०७५ साल
काठमाडौं, ४ चैत नायिका रेखा थापा क्रिकेट टिमको मालिक बनेकी छन् । काठमाडौंको स्वामित्व रेखाले लिएकी हुन् भने विराटनगर टोलीको स्वामित्व अनुप सक्सेना, भैरहवाको स्वामित्व अनिल भण्डारी र दीपक सुवेदी, धनगढीको हरी खनालले लिएका छन् । नेपालमा आयोजना हुने तय भएको पहिलो महिला टी-ट्वेन्टी फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिताको टोली, मालिक र मार्की प्लेयर सार्वजनिक समारोहमा रेखा टिमको मालिक भएको सार्वजनिक गरिएको हो । आयोजक एन.सी.एल...
सलमान खानले खोल्दैछन् टिभी च्यानल
आईतवार, चैत्र ३, २०७५ साल
काठमाडौँ, ३ चैत । ‘बिग बोस’ र ‘दशका दम’ जस्ता चर्चित शो हरुमा काम गरिसकेका सलमानले नयाँ टिभी च्यानल खोल्न लागेको हल्ला भारतीय मिडियामा व्याप्त भएको छ । बलिउडमा तहल्का मच्चाउँदै आएका सलमान खानको क्रेज टिभीमा पनि उत्तिकै छ । टिभीको दुनियाँमा पनि शनशनी मच्चाउन तल्लिन रहेका सलमानको ‘भारत’ फिल्म आगामी ईदमा रिलिज हुने तयारी रहेको छ । त्यस्तै उनि ‘द ब्याङ्ग टुर’..
निकले पूर्वप्रेमिमकासँग च्याट गर्दै गर्दा रंगेहात समातीन प्रियंकाले
शुक्रबार, चैत्र १, २०७५ साल
मुम्बई १ चैत । तीन महिनाअघि मात्रै विवाह बन्धनमा बाधिँएका बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र हलिउड गायक निक जोनस विवाहपछि अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । प्रियंका केही दिनअघि भाइको विवाहको कार्यक्रममा भारत आउकी थिइन् । सञ्चार माध्यमहरुमा विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहेका यो जोडीको फेरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् । भाइरल हुनुको मुख्य कारण यतिवेला चाहिँ निककी पूर्वप्रमिका माइली साइरस हुन् ।..
बलिउड नायिका तनीषा मुखर्जीमाथी अमेरिकामा दुर्व्यवहार
मंगलवार, फागुन २८, २०७५ साल
एजन्सी, २८ फागुन । बलिउडमा काम गरिसकेकी नायिका तनीषा मुखर्जीलाई संयुक्त अधिराज्य अमेरिकामा दुर्व्यवहार भएको छ । बलिउडकी सफल नायिका काजोलकी बहिनी तनीषालाई न्यूयोर्कको एक होटलका कर्मचारीले नस्लीए भेदभाव गरेको बताएकी छिन् । क्राई अमेरिकन च्यारिटीको कार्यक्रममा गएकी उनि साथीहरुसँग एक होटेलमा जाँदा अफ्रिकम अमेरिकन मुलका मान्छेबाट यस्तो दुर्व्यवहार भएको उनले बताइन् । उक्त होटेलमा आफुले राम्रो व्यवहार गरेपनि ति व्यक्तिले तनीषालाई अंग्रेजी..
नायिका निरुता सिंहलाई डेंगु, उपचारका लागि मुम्बई
आईतवार, फागुन २६, २०७५ साल
काठमाडौँ, २६ फागुन लामो समयपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कमब्याक गरेकी नायिका निरुता सिंहलाई डेंगु भएको छ । केहि समय अघि चलचित्र ‘क्याप्टेन’को प्रमोशनमा ब्यस्त देखिएकी नायिका बिरामी भएपछि मुम्बई गएकी थिइन् । मुम्बई गएर उपचार गराउँदा उनलाई डेंगु भएको चिकित्सकले बताएका थिए । रुघाखोकीले निकै च्यापेपछि निरुता मुम्बई गएकी थिइन् । अहिले उनको मुम्बईमा उपचार भइरहेको छ । उनलाई ‘क्याप्टेन’को प्रमोसनमा नेपालगञ्ज..
Results 550: You are at page6of 19